Ciidanka AMISOM oo Muqdisho ku jiiray gaari BL-ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidanka AMISOM oo Muqdisho ku jiiray gaari BL-ah
Ciidanka AMISOM oo Muqdisho ku jiiray gaari BL-ah
Kolonyo gaadiidka AMISOM ah oo galabta marayay Isgoyska KM4 ayaa mid ka mid ah gaadiidka Ciidamada AMISOM, wuxuu jiiray gaari BL-ah, kadib markii gaadiidka AMISOM ay ku riixeen gaarigaasi oo isku dayayay inuu ku kala wareegsado meel ku dhaw aargada KM4, xilli Baabuurka dad ay saarnaayeen.
Sawirro laga soo qaaday shilkaasi AMISOM ay geysatay ayaa la soo dhigay Baraha Bulshada, taasi oo muujinaysa in ciidamada AMISOM aysan u jixin jixeyn Bulshada ku nool Muqdisho.
Gaariga BL-ka ah ayaa waxaa burbur uu ka soo gaaray qeybta hore gaar ahaan dhanka bidix, taasi oo qasabtay Darawalkii gaariga waday iyo dadweyne kale in ay is hor istaag ku sameeyaan kolonyada AMISOM.
Intaasi kadib waxaa goobta soo gaaray Guddoomiyaha Degmada Waaberi iyo Saraakiil Ciidan, oo arrintan kala dhexgalay, maadaama wadada ay noqotay mid ciriiri ah oo Baabuurta ay isku xirmeen.
Darawalkii gaariga watay ayaa markii dambe lagu qanciyay in la siiyo 120 Dollar oo uu sheegay in sameynta gaariga ay ku baxeyso, waxaana lagala balamay Guddoomiyaha Degmada Waaberi Rowdo C/laahi, sidaas ayaana lagu xaliyay arrinta.
Dhacdooyinka ciidanka AMISOM ay gaysanayaan oo ah kuwa isa soo taraya, ayaa u baahan wax ka qabasho ficil ah oo aanan hadal hayn, maadaama haddii ciidamada AMISOM sidaan ay ku sii socdaan ay gaysanayaan falal kale oo intaa ka dhibaato badan.